Gobolka Gedo iyo Ururka Al-Itixaad Al-Islaami | maktabadda | Af-Soomaaliga
Category Archives: Gobolka Gedo iyo Ururka Al-Itixaad Al-Islaami
10/08/2017 Gobolka Gedo iyo Ururka Al-Itixaad Al-IslaamiAxmed F. Cali "Idaajaa"maamule
Saaxiibbeyaal… akhristeyaal: Qoraalkan oo aan ku magacaabay: “Gobolka Gedo iyo Ururka Al-itixaad Al-islaami: Maxaa run ah? Maxaan ahayn?”, wuxuu ku dhisan yahay sodcaal 100 maalmood ah oo aan gobolkaas ku tegey intii u dhexaysey bilihii Juun ilaa Sibtembar ee sannadkaasu, 1994ka. Ma ahayn arrin aan iyada kabaha u illaday oo markii hore ii qorshaysnayd. Waxay igu dhalatay kaddib markaan gobolka bil joogey oo aan arkay sida laanta Gedo ee urur-diineedka Itixaadka lagu magacaabaa ay u saamaynayso nolosha siyaasadda, midda dhaqaalaha iyo midda bulshada ee dadweynaha halkaas deggan.
Beledxaawo, amaba sidii waayadii hore loo yiqiin Buuloxaawo, waa magaalo yar oo ku taal cirifka ugu baalleeya Gobolka Gedo oo isna ku yaal koonfur-galbeed Soomaaliya. Waxay soohdin hal kiilomitir ka yar la leedahay Mandheera oo iyaduna ku taal cirifka ugu baalleeya Gobolka Waqooyi-bari ee Keenya, 1963kii ka horna loo yiqiin ‘northern Frontier District’ (NFD). Gedo oo idil sida lagu yaqaan, waxay B/Xaawo ku tilmaaman tahay cimilo kulul, asii qallalan oo lahayn hawada qoyan oo u daran dadka lafaha iyo kalaggoysyada ka sheegta. Berigii ay dawladdii soomaalidu jirtey, waxay ka mid ahayd magaalooyinkii loo aqoonsanaa ‘dekedaha’ ee ku dhisnaa ganacsiga soodejinta iyo weliba dhoofinta, dakhli aan yaraynna waxay soo gelin jirtey dawladdeeda hoose iyo tii dhexe oo Xamarba.
Toddoba sano kolkuu aragtidiisa faafinaayey ayaa waxaa la soo gaarey sannadkii Hijriga ee ahaa 1150, sannadkaas oo ahaa kii uu M. Cabdulwahaab aad uga soo shaac-baxay Gobolka Najd iyo miyigiisa. Waxaa raacay Amiirkii magaalada Ad-dirciya Maxamed Ibn Sacuud inuu dacwadaas cusub ugu adeegto ballaarinta Boqortooyadiisii markaas ka hor sida weyn u koobnayd. Duullaammo aan kalaggo’ lahayn ayuu ku qaaday qabaa’ilkii carbeed ee ka baxsanaa taliskii Ad-dirciya, waxaana raacay dad aan yarayn oo ka baqay ciidammadiisa amaba bedow ahaa oo u xishay xoolihii ay dagaallada ka helayeen ee uu Sheekh Maxamed ugu sheegay inay la xeer yihiin kuwa jahaadka gaalada lagu taabo ee ay muslimiintu qaybsadaan! Dhul aad u ballaaran ayay muddo gaaban ku qabsadeen, waxaase ku daatay dhiig badan oo, malaha, inuu daataa aanay diinta Islaamka wax ugu fillayn. Sannadkii Hijriga ee 1217kii markii ay magaalada Daa’if qabsadeen ninkii ka taariikheeyey wuxuu yiri, “Waxay laayeen saqiir iyo kabiir, madax iyo manjo… Carruurta dhabta hooyadood ayay ku gawracayeen, xoolaha way dhacayeen, dumarkana way qafaalanayeen, waxayna ku kacayeen waxyaabo aan la soo koobi karin..” Duullaammadaas kolkii uu ka sheekeeyey ayuu ku soo gebaggabeeyey, nWaxay ahaayeen belaayo uu Eebbe ku jirrabay addoommadiisa iyo fitnooyinka Islaamka dhexdiisa ka soo daahiray kuwa ugu waaweyn middood!5
– inay iyagu mas’uul ka yihiin gobolka oo si buuxda u fulin waayey qodobbadii heshiiskii Addis Ababa, gaar ahaan qaybihiisii ku saabsanaa dhismaha guddiyada maamulka degmooyinka, kuwa gobollada iyo, marka ugu dambaysa, golaha sharci-dejinta ee qaranka;
– inay mas’uul ka yihiin heer-nololeedka sida weyn u hooseeys ee Beledxaawo, ka dib markii ay kaalmadii shisheeye iyo hay’adihii samafalka ka hor-joogsadeen.
1. SNF (Somali National Front): Urur ama jabhad ka mid ah kuwa soomaaliyeed ee ay qabiilka Marreexaanku isugu tageen dhammaadkii ’91kii, burburkii dawladda soomaaliyeed ka dib. Waxay jabhaddaas iyo taageereyaasheedu ka taliyeen degmooyinka Cabudwaaq iyo Balanballe oo Gobolka Galguduud ka tirsan iyo afar degmo oo ka mid ah lixda uu Gobolka Gedo ka kooban yahay.
2. USC (United Somali Congress): Mid ka mid ah, uguna dambaysey jabhadihii hubaysnaa ee ay qabaa’ilka soomaalida qaarkood u samaysteen manjoxaabinta iyo rididda xukuumaddii M. S. Barre. In kastoo ay durbadiiba laba u kala jabtay, haddana waxay bilawgii ahayd jabhad ay qabiilka ‘hawiye’ isugu tageen. Sannadkii 1989kii ayaa Rooma lagu asaasay.
3. Fikriga Wahaabigu wuxuu kolkii ugu horreeyey dalka Soomaaliya soo galay afartameeyihii qarnigan, ha yeeshee si xoog leh ayaa looga horyimid, gaar ahaan Gaalkacyo iyo meelo kale oo gobollada dhexe ka mid ah. Wuxuu yeeshay sumcad xun, dadkii yaraana ee raacayna waxaa loo bixiyey “BIDCO”. Sidaas daraaddeed, madaxda Itixaadku, in kastoo ay fikrigaa dalka ku faafinayaan, haddana uma fududa inay qirtaan, waxayna jecel yihiin in loogu yeero ‘dhaqdhaqaaq salafi ah’ (xrkat salafiya)
4. Dacwada Wahaabiyada oo Gobolka Najd ka bilaabatay waxay sababtey isbahaysi ilaa maantaba jira oo ka dhexeeya warasadii Sheekh Maxamed Cabdulwahaab iyo qoyska Reer-Sacuud oo ku magacaaban dhulka ballaaran ee hadda loo yaqaan Boqortooyada Sacuudiga.
5. Akhri kitaabka ‘Ad-durar As-saniyah Fir-raddi Calal-wahaabiyah’ oo uu qoray Axmed bin Zeyni Daxlaan, bogagga 48-49, daabacaadda Shanaad, laguna faafiyay Qaahira, 1985kii. Magaca kitaabka oo ah carabigii uu ku soo baxay waa: “”
6. Bisha 3d ee sannadka Islaamka; Rabiic Al-Awal.
7. Arag aayadda 11d, suuradda 42d ee Qur’anka kariimka ah, laqbaheeduna ka doono kitaabka la yiraahdo: Tafsiir Al-jalaaleyn, bogga 312d, kana soo baxay Daar Ibn Kathiir, daabacaadda 6d, Beyruut, Lubnaan.
8. Tusaale ahaan, arag: Aayadda 88d, suuradda 28d, B) aayadda 64d ee suuradda 5d, C) aayadda 27d ee suuradda 55d, D) aayadda 10d, suuradda 48.
9. Arag bogga 45d ee kitaabka: Ad-durar… (eeg kor iyo tirsiga 5d).
10. Caqiidada Al-Ashcariyah oo ku magacaaban Sheekh Ashcari oo ahaa Reer-Baqdaad ahaa (dhintay AD 935) waa midda ay muslimiinta dunidu u badan tahay, lana rumaysan yahay inay tahay caqiidada ugu saxsan kolka laga hadlaayo sifooyinka Eebbe ee abad-jirenka ah, sugidda aragtidiisa maalinta Qiyaamaha iyo awoodda aan xadka lahayn ee uu ku maamulo abuurtiisa iyo weliba falalkooda. Culimmada wwaweyn ee Ashcariyada waxaa ka mid ah: Al-Baaqillaani (dhintay AD 1013), Al-Baqdaadi (dhintay AD 1037) iyo Al-Juweyni (dhintay AD 1085).
11. Tusaale ahaan, sida ay soomaalidu u badan tahay, haddii aad baratay oo aad mad-habta Shhaficiyada ku dhaqato, waxaa loo baahan yahay inaad weyseysato mar alla markii aad taabato qof dumar ah oo aan teed kaa xigin, qaangaar ah (15 sano jirtey), shisheeyana kaa ah. Afarta mad-habood midna haddii aadan barannin waxaa kuu bannaan, markii aad isla qofkaas dumarka ah taabato, inaad hadii aad doontana iska tukato, haddii kalena aad weyseysato, adiga oo ka faa’idaysanaya sidii ay culimmadaasu isugu khilaaftay laqbaha aayadda 6d ee suuradda shanaad ee Qur’aanka kariimka ah.
12. Tusaale ahaan, Ingiriiska iyo Talyaanigu kolkii ay Sayid Maxamed Cabdille Xasan u maleegeen afgenbigii dhicisoobey ee taariikhda ku galay magaca ah ‘Canjeel-talo-waa’, raggii ay ku adeegteen waxaa ka mid ahaa Darwiishkii laoran jirey Cabdalla Shixiri oo intii muddo ah Daraawiishta arrimaha dibedda u qaabbilsanaa. Cabdalla Shixiri, isagoo fulinaaya qorshaha labadaas dawladood, dhinaca diinta Sayidka ka dacaayadaynaya ayaa waxaa la geeyey Maka, si uu hoggaamiyaha Daraawiishta uga ashtakeeyo bersadda Sheekh Maxamed Saalax oo sheekhiisii ahaa. Hawlgalkaasi wuxuu dhalay warqad ceebayn iyo ‘dayro’ ah oo Sayidka u jeedda, hase ahaatee taariikhyahannada Daraawiishtu ay qabaan inay ‘bug’ ahayd oo aanay xafiiska Sheekha ee Maka ka soo bixin. Si kastaba ha ahaatee, gabayada Sayidka mid ka mid ah (Arag diiwaanka gabayadii Sayid Maxamed, bogga 299) wuxuu ku xusayaa Cabdalla Shixiri iyo warqad uu, malaha, isagu Maka geeyay, wuxuuna ku tilmaamayaa tilmaamo saddex ah oo ay ka mid tahay inuu ‘WAHAABI’ yahay. Wuxuu yiri:
13. Culimmo ka tirsan Ahl As-sunnah wal-jamaaca oo aan gobolka ku arkay waxay qabaan inay, diin ahaan, xaaraan tahay xoolaha sakada in lagu ‘biilo’ ciidan aan jahaad xaq ah ku jirin oo ‘ujeeddooyin adduunyo’ loo samaystay, sida midka uu Itixaadku Gedo ku leeyahay. Waxay taas u cuskanayaan Qur’aanka kariimka ah oo si cad u qeexay dadka nooca mudan in sakooyinka loo qaybiyo. Arag aayadda 60d ee suuradda 9d, laqbaheedana ka akhri: Tafsiir Al-Jalaaleyn, bogga 196, Daar Ibn Kathiir, daabacaadda 6d, Beyruut.
14. Sheekh Cabdulcaziiz Bin Baaz oo ah Muftiga Sacuudigu wuxuu muddo dheer mas’uul ka ahaa arrimaha diinta ee dalkaas, waxaana la rumaysan yahay xafiiskiisa oo miisaaniyad xoog leh maamulaa inuu si aan toos ahayn u taakuleeyo laamaha Itixaadka ee Geeska Afrika. Laanta Gedo ee ururku waxa ay aad u qaybisaa oo qofkii ku biiraba ay siisaa kitaab yar oo uu Sheekhaasi qoray, looguna talo-galay inay dadku isaga keliya ka bartaan sida ‘habboon’ ee loo tukado. Waxaa lagu magacaabaa: Sifatu Saaltin-nebi.
15. Sidaan meel hore ku soo sheegnay (Arag kor iyo tirsiga 4d), isbahaysigii Sheekh Maxamed Cabdulwahaab iyo maxamed Bin Sacuud ee qarnigii 18d, wuxuu dhalay Boqortooyada Sacuudiga. Heshiiskaas isbahaysiga oo ilaa maanta dhaqangal ah waxaa qodobbadiisa aan weligood la jebin ka mid ah inay Reer-sacuud yeeshaan Boqortooyada maamulkeeda dawlad ahaaneed, qoyska Aal-Ashaykhna looga dambeeyo arrimaha diinta.
16. Qodobbadaas qaar ka mid ahi waxay ku xusan yihiin Fiq-higa Al-Imaam Axmed, sidaas darteed, maamuusid mooyee, ku dhiirran mayno duriddooda. Waxaan u soo qaadannay oo keliya inaan muujinno sida ay wareer ugu ridi karaan dadka soomaalida ah ee boqollaalka sano Fiq-higa Shaaficiyada ku soo dhaqmaayey. Bal malee dareenka nin soomaali ah oo lagu yiri, “hilibka geelu weysada waa jebiyaaye, mar alla markaad cunto ka weyseyso!”
17. Labada Sheekh ee aan Nayroobi iyo Beledxaawo kula sheekeystay , in kastoo ay gobolka u dhasheen, haddana waxay iga codsadeen in aanan magacooda sheegin, haddii ay dhacdo inaan warkooda isticmaalo. Sheekha aan Beledxaawo kula kulmay wuxuu ii sheegay inuu dhowaantan joojiyey inuu ku tukado masaajiddada ay Itixaadku maamulaan ee ku kala yaal labada magaalo ee ay gobolka ka haystaan.
18. Almustaqbal International; cadadkii 4d iyo 5d, july-December, 1994; Toronto – Ontario, Canada.
19. Marka ay Wahaabiyadu ceebaynayaa Tasawufka waxay u badan yihiin inay soo daliishadaan aayadda 3d ee ku jirta suuradda 39d ee Qur’aanka kariimka ah, taasoo uu Eebbe uga warramaayo sababta ay gaaladii Maka ‘asnaamta’ u caabudi jireen oo ahayd inay Eebbe ugu dhowaadaan, iyaguna ay taas ku kaalmayn karaan.
20. Arag bogga 20d ee Kitaabka: Ad-durar As-saniyah (eeg kor iyo tirsiga 5d).
21. Waxay dadka gobolka qaarkood ii sheegeen in cunnada sadaqada ah ee 1992 iyo ’93kii uu Itixaadku marmar keeni jiray degmada Beledxaawo iyo Luuq ay siin jireen oo keliya qoysaska ururka ka tirsan. Baahi doontaa ha haysee, dadweynaha aan ururka ahayni kaalmadaas weligood lama siin.
22. Akhri aayadda 11d ee suuradda 4d ee Qur’aanka kariimka ah.
23. Arrimaha diinta ee Soomaaliya waxaa inta badan danayn jirey wargeyska Al-mujtamac ee dalka Kuweyt ka soo bixi jirey iyo cajalado uu soo saari jirey Sheekh Reer-Masar ah oo lagu magacaabo: Kishk.
24. Sheekh Maxamuud Macallin Nuur oo ninka 2d ka ah madaxnimada Itixaadka Gedo.
25. Ereyga ay Itixaadku madaxdooda ku tilmaamaani ma aha mid afsoomaali ah, anigaana erayga ‘guddomiye’ halkaan u doortay, si ay akhristeyaashu ujeeddada u gartaan. Waxay iyagu isticmaalaan erayga afcarbeedka ah: AMIIR. Sidaas darteed, Sheekh Maxamed Xaaji Yuusuf waa Amiirka Itixaadka Gedo, Sheekh Maxamuud waa Amiir-ku-xigeenka, ardayga fasallada dugsiyada midkood kabiirka ka ahi waa ‘amiirka fasalka’, haddii ay gabar tahayna waa ‘amiiradda fasalka’.
26. Sheekh Maxamed Macallin Xasan waa nin diinta Islaamka aad u yaqaan oo Soomaaliya iyo Masarba wax ku bartay. In badan ayaa lagu xiray amarka xukuumaddii M. S. Barre, isagoo mar walba loo haysan jirey inuu xukuumadda manjoxaabinaayo, una adeegsanaya diinta.
27. Waraysigaasi wuxuu ka baxay BBCda, laanta afsoomaaliga, 16/10/94
28. SSDF (Somali Salvation Democratic Front): Waa jabhaddii ugu horreysay jabhadihi ay qabaa’ilka soomaalidu u abuuraan, si ay u ridaan xukuumaddii M. S. Barre. Waxaa 1978kii asaasay G/Sare Cabdullaahi Yuusuf oo ka tirsanaa Xoogga Dalka Soomaaliyeed, waxayna markii, tol ahaan loo eego, ay ku magacaaban tahay qabiilka Majeerteen ee Daaroodka ah.
29. Tiradaas waxaan afkiisu ka hayaa Cabdullaahi Yuusuf oo aan Rooma ku arkay bilawgii sannadkan ’94ka. Ha yeeshee, dadka kale oo aan la kulmay, gobolladaasna u dhashay tirada intaas way ka yaraynayaan, lamana aha inay 100 nin ka badnayd.
30. Raggii dagaalkaas Luuq ku dhiirraday ee SNFta la galay waxaa hormuud u ahaa wadaad la oran jirey Sheekh Yuusuf oo ahaa ninkii Itixaadka, ciidan ahaan, Gobolka Gedo ka asaasay. Isla dagaalkaas ayuu ku geeriyooday, isaga iyo rag kale oo ka mid ahaa kooxdii uu kaxaystay.
31. Waxaa arrintaas ku adkaystay wadaad la yiraahdo Sheekh Xasan Daahir oo Hawiye ah (Habargidir!).
32. Waraysi aan Beledxaawo kula yeeshay Axmed Cibaad Bulxan, 22/6/’94ka.
33. G/Sare Yuusuf Dhuumaal oo waraysi Beledxaawo kul yeeshay 22kii Juun ee sannadkaan, wuxuu, ilaa beri dhowayd, ka mid ahaa madaxda sare ee Itixaadka. Wuxuu ii sheegay inuu ka baxay ka dib markuu ogaaday ‘inaan meesha diin lagu hayni uu ururku xukun-doon yahay’.
34. Yuusuf Dhuumaal (Arag kor iyo 33d).
35. Dib u xusuuso waraysi ay BBCda, laanta afsoomaaligu la yeelatay Sheekh Itixaadka ka tirsan bishii Mey ee sannadkaan. Markii la weydiiyey meelaha uu ururku Soomaaliya ka haysto, wuxuu sheegtay ‘Luuq’. Waxaad kaloo akhrisaa maqaalka ku magacaaban, “Luuq Waa Tusaale ku-dayasho Mudan” oo ku soo baxay Almustaqbal (Arag kor iyo tirsiga 18d).
36. Warqadda Sheekh Aadan Sheekh Cabdullaahi waxaa inay jirtay ii sheegay Maxamuud Khaliif Shire oo ah Guddoomiye-ku-xigeenka SNFta iyo Sheekh Maxamuud Macallin Nuur, ku-xigeenka Itixaadka Gedo. Wuxuu kaloo Sheekh Maxamuud iigu sheegay waraysi aan la yeeshay (17/6/94) inay Itixaadku diyaar u yihiin inay Marreexaan kala xaajoodaan wax walba oo aan ‘dhiibista hubku’ ku jirin, taasoo aannaan oggolayn in aan cidna kala hadalno!
37. Guddoomiye-ku-xigeenka SNFtu, wuxuu bilawgii Agoosto ee sannadkan Beledxaawo iigu sheegay inay burbureen wadahadalladii ugu dambeeyey ee uu madaxda Itixaadka kala yeeshay arrinta Degmada Luuq. Wuxuu ii sheegay inay si cad ugu gacan-sayreen dhismaha guddiga 21ka ah ee degmada, iyagoo aan bixin, haba yaraatee, sabab lagu qanci karo.
38. Akhri wargeyska Almustaqbal bogagga 26-27; (Arag kor iyo tirsiga 18d).